We.com.mm - အမြင်မတော်တဲ့ ကွမ်းတံတွေးကွက်တွေကို အငြိမ်းစားကျောင်းအုပ်ကြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးနေရ
အမြင်မတော်တဲ့ ကွမ်းတံတွေးကွက်တွေကို အငြိမ်းစားကျောင်းအုပ်ကြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးနေရ
တာချီလိတ်မြို့ပေါ်က လမ်းမကြီးပေါ်မှာ စည်းကမ်းမဲ့ထွေးထားတဲ့ ကွမ်းတံတွေးတွေကို အငြိမ်းစားကျောင်းအုပ်ကြီးတစ်ဦးက လိုက်လံရှင်းလင်းပေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။
မြန်မာ - ထိုင်းနယ်စပ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းမကြီးပေါ်က ကွမ်းတံတွေးကွက်တွေကို ဆရာကြီးက လိုက်လံသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး ကွမ်းတံတွေးထွေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ဒီလိုထွေးတာမကောင်းဘူး ဆိုတဲ့ Mindset လေးရသွားအောင်လို့ ဒီလိုမျိုးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးရတာဖြစ်တယ်လို့ ဆရာကြီးက ဆိုပါတယ်။
အဆိုပါ ကွမ်းတံတွေးကွက်ရှင်းလင်းမှုတွေကို ၂၀၁၉ မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့အထိ သုံးရက်တာ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားဦးမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
ပြည်နယ်တစ်ခု၊ မြို့တစ်မြို့စီမံချက်အရ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းလျာထားတဲ့ မြို့နယ် ( ၃ ) မြို့မှာ ပါဝင်နေတဲ့ တာချီလိတ်မြို့မှာ အပတ်စဉ် စနေနေ့တိုင်း စုပေါင်းအမှိုက်ကောက်လှုပ်ရှားမှုကို ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ ရပ်ကွက်နေလူထုက မတ်လ ( ၉ ) ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီး ( ၁ ) နှစ်တာ စီမံချက်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။
ဆရာကြီးရဲ့ နာမည်ကတော့ ဦးခင်မောင်ဖြစ်ပြီး အသက် ( ၇၉ ) နှစ်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။
Source - Nu Yin
စင်ကာပူကို ရင်ဘောင်တန်းတော့မယ့် မြန်မာနိုင်ငံက ပထမဆုံးမြို့
အငြင်းပွားနယ်စပ်တွင် တရုတ်တို့ စစ်စခန်းတည်ဆောက်နေသည့်ဂြိုဟ်တုပုံရိပ်များ အိန္ဒိယထုတ်ဖော်
ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ရော တန်လို့လား ? တန်တယ်လို့ရော ထင်လား ?
ရုပ်ရှင်ချစ်သူတွေထဲ လူပြောများနေတဲ့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် သည်းထိတ်ရင်ဖိုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး
Thor4ဇာတ်လမ်းရိုက်ကူးဖို့ ဒါရိုက်တာနဲ့ အဓိကဇာတ်ကောင်မင်းသား အတည်ပြု